Mpiasan’ny Jirama 359 voaroaka Fanaovana fahadisoana goavana no antony
Manoloana ny hetsika nataon` ny farimbon-tsendikalin` ny JIRAMA, nilaza ny amin` ny fitantanana foibe fa tsy mitombina ny fitakian` ireo sendikà ireo indrindra ny iray amin'ireo fangatahana sendikaly izay mikasika ny fandroahana mpiasa izay heverina fa tsy marim-pototra. Raha ny tatitra voaray dia nanomboka ny taona 2016
no nisy fanasaziana mpiasa teo anivon`ity orinasam-panjakana ity. Mpiasa miisa 359 nanao fahadisoana goavana miverimberina teo anivon`ny orinasa. Raha ny taona 2018, 76 ireo mpiasa no voasazy, ny taona 2017, niisa 145 izy ireo ary ny taona 2016, nahatratra 138 Raha voalaza ao anatin`ny tatitra dia fanaovana hosoka antontan-taratasy, mpiray tsikombakomba amin`ny halatra, fanodikodina fitaovan` ny orinasa,  tsy manaja ny ambaratongam-pahefana, fifandraisana tsy ara-dalàna sy fifamoivoizana ny herinaratra, kolikoly, fanitsakitsahana ny fepetra sy ny tsy fitandremana amin'ny fanatanterahana ny adidiny. Araka ny loharanom-baovao iray, voahaja ny lalàna momba ny asa tamin’ ny fanasaziana sy fandroahana mpiasa teo anivon`ny orinasa. Ny fitsipika amin'izao fotoana izao dia milaza fa izay rehetra manitsakitsaka ny fitsipi-pifehezana dia voasazy. Ao amin'ny orinasa JIRAMA, miisa enina ny sokajina sazy : fampatsiahivana ny lamina, fampitandremana am-bava, fampitandremana an-tsoratra, fiantohana amin`ny fotoana voafetra, fandroahana miampy filazana (licenciement avec préavis) sy ny fandroahana tsy misy filazana (licenciement sans préavis).  Mahakasika ny fanelanelana nataon` ny sampandraharaha mpanara-maso ny asa (inspection de travail), ny sendikà dia nitaky ny fijerana manokana ny momba an` ny mpiasa iray nahazo fandrohana saingy nilaza ny “inspection” fa maro ireo dosie arahina maso ka tokony hitovy zo avokoa. Nanamafy kosa ity sampandraraha ity fa tsy afaka miditra an-tsehatra amin`ny fanesorana ny tale jeneralin`ny orinasa izy ireo. Marihana hatrany fa ny farimbon-tsendikalin` ny JIRAMA dia tsy nety nihaona tamin`ny solontenan`ny orinasa.  Miantso amin`ny fifanatonana hatrany kosa ny ministera mpiahy.
Legende: (sary fanehoana)